Kooxa ku Hubeysan Bistoolada oo 3 Askari ku qaarajiyey magaalada muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kooxa ku Hubeysan Bistoolada oo 3 Askari ku qaarajiyey magaalada muqdisho
Kooxa ku Hubeysan Bistoolada oo 3 Askari ku qaarajiyey magaalada muqdisho
Kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa saakay isgooska Siinay ee magaalada Muqdisho ku toogtay sadex askari oo katirsan ciidanka booliiska Soomaaliya kuwaa oo ka howlgalayay isgooskaasi .
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in raga hubeesan si gaadmo ah u toogteen askarta katirsan booliiska oo goobtaasi ku geeriyootay, waxaana raga hubeesan horey usii qaateen qoryihii ay wateen ciidamada la toogtay.
Ciidamo katirsan booliiska ayaa dilka kadib gaaray isgooska Siinay iyagoona halkaasi ka qaaday askarta la toogtay, ciidamada ayaa sidoo kale howlgal ay halkaasi ka sameeyeen ku guul dareestay in ay soo qabtaan kooxdii dilka geesatay.
Ciidamada booliiska ee ka howlgala isgoosyada kuyaala magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay dayacan yihiin taa oo xiliyada qaar keenta in bambaano lagu weeraro sidoo kale toogasho loo geesto askarta qaar.
Previous articleGudoomiyqha Golaha Badbaadinta Qaranka oo ku baaqay in laga Hor tago Kaligiitaliyaha Bur burka la doonaayo umada Soomaliyeed
Next articleFahad Yasiin oo ku sii jeedo si u soo dhaweeyo Wasiirkii Hore ee Amniga Cabdirashiid Janan
Taliska booliska soomaaliya ayaa goordhow ka hadlay qaraxa ismiidaaminta ee caawa lagu qaaday Maqaayada Luul Yemeni oo ku taala degmada Xamar Jabjab ee gobolka...
Farmaajo oo tacsiyeeyay geerida ku timid Madaxweyne Ku-xigeenkii Hore...